Dabaaldegii Maanta loo Qabtay Sanad Guuradii 47-aad ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed (VIDEO) | Entertainment and News Site
Home » News » Dabaaldegii Maanta loo Qabtay Sanad Guuradii 47-aad ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed (VIDEO)
Dabaaldegii Maanta loo Qabtay Sanad Guuradii 47-aad ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed (VIDEO)
daajis.com:- Waxaa Maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 47-aad ee ka soo wareegatay markii la aas aaska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay Madax ka tirsan Dowladda Federaalka iyo Baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha Baarlamaanada Sare iyo kan Hoose iyo Taliyeyaasha Ciidamada qalabka sida.
Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) Guddoomiyaha Golaha shacabka ayaa faray Taliyaha Asluubta Soomaaliyeed, sida ay muhiim u tahay meel marsiinta qodobada Dastuuriga ee qeexaya xuquuqda Muwaadiniinta ku jira xabsiyada Dowladda in la dhowro.
Taliyaha Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed, Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) ayaa hoosta ka xariiqay in Ciidamada Asluubta ay ku sugan yihiin daruufo, marka loo eego ilaalinta xabsiyada ay gacanta ku hayaan iyo Miisaaniyad weyn oo Dowladdu aysan ugu talagelin Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) Taliyaha Ciidamada Asluubta ayaa soo hadal qaaday xaalada xabsiga dhexe ee Muqdisho, isagoo xusay dhismahan in uu yahay mid mar hore la dhisay uuna u baahanyahay il ku heyn gooni ah.